SHIMBIRTA UKRIGA AH AYAA DIB LOO SOO GELIYAA MIDOWGA YURUB MAR LABAAD - UKRAINE
Shimbirta Ukriga ah ayaa dib loo soo geliyaa Midowga Yurub mar labaad
Ukraine iyo Guddiga Yurub ayaa gaaray heshiis ku saabsan dib-u-soo-celinta ee dhoofinta digaagga Ukraine ee dalalka EU. Sida laga soo xigtay war-saxaafadeedka Wasaaradda Beeraha iyo Warshadaha, hilibka digaaga maanta waxaa la siiyaa suuqa Yurub.
Dhibaatada ka jirta gobolka ayaa ah mid ka mid ah dareenka ugu weyn ee la xiriirta guddiga yurub, taas oo ka dhalatay wada-hadallada iyo go'aamada ay qaadeen Ukraine iyo Midowga Yurub, mabda'a gobol-goboleedyada ayaa hore loo isticmaalay in lagu ganacsado digaaga iyo hilibka digaaga. "Maanta, dhoofinta digaagga Ukrayna ee dalalka EU-da ayaa dib loo soo celiyay," ayuu yiri Taras Kutovoy.
Dib-u-dhajinta dhoofinta hilibka digaaga ayaa la sameeyey iyada oo la kaashanayo mabaadii'da goboleed ee mabaadi'da goboleed ee ku saabsan xaaladaha shimbiraha ee u dhexeeya Ukraine iyo Midowga Yurub, kuwaas oo labaduba ay yimaadeen intii lagu gudajiray Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Cuntada Ukraine Taras Kutovogo oo ah Guddoomiyaha Yurub Vityanis Andryukaytis intii lagu jiray "Green Week".